မကြာခင် MRTV-4 ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ တွေ့မြင်ရတော့မယ့် သူလေးက? - Tha Dinn Oo
ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ ယခုပြောပြပေးသွားမယ့် အကြောင်းအရာလေးကတော့ ကြော်ငြာ မော်ဒယ် ငြိမ်းမြတ်သူ ရဲ့ အကြောင်းလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ သူလုပ်ကိုင်နေတဲ့ အလုပ်ကို ချစ်မြတ်နိုးပြီး ရိုးသား ကြိုးစားနေတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။
သူမဟာ ယခုလို ကိုဗစ်ကာလမှာတော့ သူလုပ်ကိုင်လျက်ရှိတဲ့ အလုပ်တွေကို မရပ်နားပဲ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေသူ တစ်ယောက်ပါ။ ကြော်ငြာတွေရိုက် photo model လုပ်ရင်း သူမကိုချစ်ခင်အားပေးတဲ့သူတွေကို သူမရဲ့ နေ့စဥ်လှုပ်ရှားမှု ပုံရိပ်လေးတွေကိုလည်း မျှဝေလေ့ရှိပါတယ်။
သို့ပေမယ့် လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာပေါ်မှာ သူမဟာ အမျိုးမျိုး ဝေဖန်ခံနေ ရပါတယ်။ သူမကို အားပေးကြတဲ့ သူတွေလည်းရှိကြပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ မကောင်းတဲ့ မှတ်ချက်တွေလည်း အပေးခံ ရပါတယ်။ တချို့ကျတော့လည်း ဟာသအနေနဲ့ စနောက်ကျီစယ် ကြတာလည်း မြင်တွေ့ရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ယခုအခါမှာလည်း ငြိမ်းမြတ်သူ ဟာ MRTV-4 ရဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ပါဝင် သရုပ်ဆောင်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက်မှာ မျှဝေလာခဲ့ပါတယ်။ သူမကတော့ ” MRTV4ဇက်လန်းတွဲမှာ မကြာခင်တွေ့ရတော့မယ့် တက်သစ်စ အနုပညာရှင်လေးက ? ” ဆိုပြီး မျှဝေလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဝေဖန်သူတွေကတော့ အမြဲလိုလို သူ့ရဲ့ မန့် အောက်မှာ ဝေဖန်နေကြပြီး share များဖြင့်လည်း မှတ်ချက်တွေ အပေးခံနေရပါတယ်။ အားပေးသူတွေကလည်း ဆက်လက်ပြီး အားပေးကြသလို တိုက်ခိုက်တဲ့ သူတွေဟာလည်း ဆက်လက်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိပါတယ်။
ဖတ်ရှု့အားပေးခဲ့ကြတဲ့ ချစ်ပရိသတ်ကြီးလည်း သူမအတွက် မှတ်ချက်တစ်ခုခု ရေးခဲ့ကြပါဦးနော်။ ပရိသတ်ကြီးအားလုံး ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာကြပြီး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့ရက်လေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ကိုယ္တိုင္ ေျပာ တဲ့ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ ႕နယ္ ေနာက္ဆုံး ရ သတင္း
လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ကိုယ္တိုင္ ေျပာ တဲ့ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ ႕နယ္ ေနာက္ဆုံး ရ သတင္း စမ္းခ်ာင္းၿမိဳ႕ နယ္ လင္းလြန္းေျမာက္ရပ္ကြက္ အဂၤပူလမ္း အိမ္အမွတ္ (၉) (၆/ဘီ) ေနသူ အသက္ (၂၆) ႏွစ္အရြယ္အမ်ိဳးသားသည္ Asia Plaza Hotel ၌ ကြာရတင္းဝင္ေရာက္လၽွက္ရွိသည္။ ၄င္းအမ်ိဳးသားသည္ ရန္ကုန္ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ တက္ေရာက္ကုသေနေသာ သာေကတ ၿမိဳ႕နယ္ေန ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိသူ Case-701 ႏွင့္ အဓိက အေရးပါေသာ ထိေတြ႕ခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။ ထို အမ်ိဳးသားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အလံျပဘုရားလမ္းေပၚရွိ လျပည့္ဝန္းေစ်းမွ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ စက္တင္ဘာလ (၁) ရက္ေန႔ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္အရအဆိုပါ အမ်ိဳးသားတြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎ေနထိုင္ရာ အဂၤပူလမ္းတိုက္အမွတ္ (၉) အား […]
Live လွှင့်စျေးရောင်းနေရင်း တစ်ဖက်မှာလည်း သားလေးမြတ်သူကို ထိန်းပြီး မအားမလပ်နိုင်တွေဖြစ်နေတဲ့ မြင့်မြတ်ရဲ့ ဗီဒီယို
မင်းသားချော မြင့်မြတ်ကတော့ အနုပညာလောကမှာ ထိပ်တန်းမင်းသားအဖြစ် အောင်မြင်မှုရရှိနေသလို တစ်ဖက်မှာလည်း ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြင့်မြတ်က နာမည်ကြီး အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပီပီ အလုပ်တွေကို နားရက်မရှိလုပ်ကိုင်နေရပေမယ့် သူ့ရဲ့ မိသားစုလေးအပေါ်မှာတော့ တာဝန်ကျေပွန်သူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခြင်းတွေ ရပ်နားထားချိန်မှာတော့ မြင့်မြတ်က မိသားစုကိုသာ ပိုမို အချိန်ပေးဖြစ်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကို စတင်နေပြီဖြစ်တဲ့ မြင့်မြတ်က ညဘက်တွေမှာဆိုရင် Live လွှင့်စျေးရောင်းရင်း ပရိသတ်တွေနဲ့ ထိတွေ့လေ့ရှိသူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြင့်မြတ်က အလုပ်အရ စျေးရောင်းနေပေမယ့်လည်း တစ်ဖက်မှာလည်း သားလေး မြတ်သူကို ထိန်းရင်း မအားမလပ်နိုင်ဖြစ်နေတာကို အခုလိုပဲ တွေ့ရပါတယ်။ မြင့်မြတ်ရဲ့ သားလေး မြတ်သူကလည်း ဖေဖေ့အနားကို အရမ်းကပ်သူလေးဖြစ်ပြီး ဖေချစ်သားလေးတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း မြင့်မြတ်တို့ […]
ဟာသသရုပ်ဆောင် မင်းသားကြီးခင်လှိုင်ကတော့ အင်မတန်လူချစ်လူခင်ပေါများတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပါပဲနော်။ ပရိသတ်တွေကို ရယ်မောပျော်ရွှင်ရအောင် သူ့ရဲ့အနုပညာအရည်အချင်းတွေနဲ့ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်လေ့ရှိတဲ့ ခင်လှိုင်က ဒါရိုက်တာအဖြစ်ပါ ဇာတ်ကားတွေရိုက်ကူးနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ခင်လှိုင်က သူ့ရဲ့သားလေးဇေရဲနဲ့ သမီးလေးသဇင်ထူးမြင့်တို့ကိုပါ အနုပညာအမွေတွေ လက်ဆင့်ကမ်းပေးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီလိုပျော်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစု ဘဝလေးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဦိးခင်လှိုင်ဟာ ငယ်ငယ်ထဲက မိဘတွေနဲ့အတူနေဖို့ ကံပါမလာတဲ့ ဝမ်းနည်းစရာ သူ့ငယ်ဘဝအကြောင်းလေးကိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ ခင်လှိုင်ဟာ တစ်နှစ်သားအရွယ် ထဲက မိခင်ဖြစ်သူက မွေးစားမိဘတွေကို ပေးခြင်းခံခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မိဘတွေကွဲချိန်မှာ အကိုကြီးနှစ်ယောက်ကိုတော့ မိခင်ကခေါ်သွားခဲ့ပြီး အငယ်ဆုံးသားလေး ဦးခင်လှိုင်ကိုတော့ မွေးစားမိဘတွေလက်ထဲပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဦးခင်လှိုင်မှာ ၂ နှစ်စီကြီးကြတဲ့ အကိုနှစ်ယောက်ရှိသေးကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ ဦးခင်လှိုင်ရဲ့ ငယ်ဘဝဟာ အဆင်ပြေပြေချောချောမွေ့မွေ့မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဦးခင်လှိုင်ကိုမမွေးစားခင်အချိန်က မွေးစားမိဘတွေကစီးပွားရေးအဆင်ပြေကြပြီး ဦးခင်လှိုင်ကိုမွေးချိန်မှ စီးပွားရေး ထိခိုက်ပြီး အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် […]
Park Bom နဲ့အတူ ဖန်တီးခဲ့တဲ့ Red Lightသီချင်းကြောင့် Kpop Fan တချို့ရဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောဆိုဝေဖန်မှုတွေ ခံနေရတဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်
မြင့်မြတ်ရဲ့ အဖေနဲ့ရောအမေနဲ့ပါ ရင်းနှီးတာကြောင့် သူတို့မိသားစုအကြောင်းကို သေချာသိပြီး မြင့်မြတ်ရဲ့ စိတ်ဓာတ်အမှန်ကို ဖွင့်ဟလိုက်တဲ့ လမင်းကဗျာ